छोरा पाउँदा खसी र छोरी पाउँदा फर्सी ? हुम्लामा अन्त्य भएन छोराछोरीबीचको विभेद – Himalitimes
छोरा पाउँदा खसी र छोरी पाउँदा फर्सी ? हुम्लामा अन्त्य भएन छोराछोरीबीचको विभेद
२०७५ फाल्गुन ४ ०६:२३ मा प्रकाशित
सिमकोट। गर्भ तथा जन्मनेवित्तिकै छोराछोरीबीच विभेद हुन्छ भनेको सुन्दा अचम्म लाग्ला तर यहाँ यस्तै छ । छोरा पाउँदा खसी र छोरी पाउँदा फर्सी भन्ने पुरानो उखानको यहाँ अझै नवीकरण भएको छैन ।‘‘ एक वर्ष अघि छोरा जन्माएपछि खसी काटेर सुत्केरीलाई ख्वाए तर त्यस अघिका चार जना छोरी जन्माउँदाका दुख्ख म बिर्सन सक्दिनँ ,’’ हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिका वडा नम्बर ३ उनापानीका रिउली महताराले भन्नुभयो । उहाँका चार जना छोरी र एक छोरा छन् ।
छोरी जन्माउँदा भने कोदाका रोटी खाएर सुत्केरीका दिन काटेको उहाँ बताउनुहुन्छ तर पनि गुनासो छैन । छोरा जन्माएर खसी खाएपछि पहिलेका सबै दुःख बिर्सनुभएको छ । हिमाली जिल्ला हुम्लामा एउटी आमाले गर्भधारणा गरेर बच्चा जन्माएपछि छोरो वा छोरी के हो ? थाहा पाउने बित्तिकै विभेद सुरु हुने गरेको छ । सामाजिक मान्यता र पितृसत्ताको सोचको कारण छोरो घरको अंश खाने र बिँडो थाप्ने तर छोरी अर्काको घरमा जाने भएकै कारण यस्तो विभेद हुने गरेको स्थानीय वासिन्दाले बताउने गरेका छन् ।
सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की तुलसा बिकले पनि सुत्केरी हुँदा छोरी जन्मिएपछि राम्रो व्यवहार नपाएको गुनासो गर्नुभयो । आफै त सुत्केरी भएर रगत बगेको अवस्थामा नातागत भई शरीरलाई धान्न कठिन भएको थियो । पोषिलो खानेकुरा नपाउँदा निकै समयसम्म थला परेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । पहिलो सन्तान हुँदा पनि छोरी भएपछि सुत्केरी अवस्थामा यस्तो खानेकुरामा समेत विभेद गरिँदा तङ्ग्रिन महिनौ लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
छोरा नजन्मिएपछि सासू र नन्दा देउरानीबाट पनि राम्रो व्यवहार नपाइएको उहाँको गुनासो छ ।महतारा र बिक सुत्केरी हुँदा छोराछोरी जन्माउँदा विभेद सहने प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ । यो समस्या उस्तै छ भन्नुहुन्छ हुम्ला जिल्लाका सांसद रङ्गमती शाही । त्यति मात्र होइन छोरी भएमा पहिलो कुरा गर्भमै ‘क्युरिट’ गरिनेक्रम बढ्न थालेका शाही बताउनुहुन्छ ।
छोरा जन्मेमा भने घरमा बन्दुक पड्काउने, छँैटी खेल्ने जस्ता हर्ष बढाइँ हुने गरेको छ । छोरी जन्मदा भने त्यस्त हर्ष बढाइँको कुनै काम हुँदैन । छोरी मान्छे भएर जन्मे पछि विभेदै विभेद सहेर अर्काको घरमा जादाँसम्म सहनुपर्ने अवस्था रहेको महिला मानव अधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष गङ्गा बोहरा बताउनुहुन्छ ।
विभेद गर्भ र जन्मनसाथमात्र हुँदैन । शिक्षामा पनि उस्तै विभेद छ । कतिपयले छोरालाई जिल्ला बाहिरका राम्रा निजी विद्यालया र छोरीलाई जिल्लाकै सरकारी विद्यालयमा पढाउने चलन पनि बढ्दै गएको छ । विद्यालयबाट आउँदा पनि छोरीले घरको चुलोचौकोदेखि मेलापातसम्म भ्याउनुपर्छ भने छोराले पढिदिए पुग्ने चलन रहेको बोहराका अनुभव छ ।जिल्ला अस्पतालका सिनियर अनमी सरिता बोहराका अनुसार छोरीका आमाहरू नातागत लगायतका बिरामी भएर बढी आउने गरेकोे अनुभव सुनाउनुहुन्छ । -गोरखापत्र